July Dream: The way I trusted
Posted by JulyDream at 11:11 PM
ယုံကြည်ရာဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာတွေနဲ့အတူ အများကြီး အများကြီး သိလိုက်ရပါတယ်..
ကိုယ်ယုံကြည်တာတွေဟာ ကိုယ့်လျှောက်လှမ်းနိုင်မယ့် လမ်းဖြစ်လာမှာပါ။ အမှန်အတိုင်းတင်ပြထားတဲ့ပိုစ့်လေး တစ်ပုဒ်မို့ဖတ်ရတာ ကျေနပ်မိပါတယ်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
အလင်းရောင်ဆိုတာက ရှိနေပြီးသားပါ.. တခါတခါ ကိုယ်ကသူ့ကိုတွေ့ဖို့ ကိုယ်တိုင်ရှာရတာမျိုး...
ကိုဇူလှိုင်ရယ် ဖတ်ရင်း မအယ် တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမယ် လို့လည်း တွေးမိပါရဲ့။
မိဘတွေကတော့ သူတို့သားသမီး နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းတို့လို့တန်းလန်းမှာ ဒုက္ခရောက်မှာ စိုးကြတာချည်းပါပဲ။
အစိုးရကလည်း အမှန်တွေကို အတင်းပိတ်ထား အိမ်မှာလည်း မသိလေ ကောင်းလေဆိုပြီး ပိတ်ထားခံရသလိုဆိုတော့ တော်ရုံ ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ ဒိတွက် ရှေ့ကလူရော နောက်က လူရောကို အပစ်မတင်ပါဘူး။ မိဘတွေကိုလည်း အပစ်မတင်ပါဘူး။
နောင်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ဘီဘီစီလေး နားထောင်ပါ။ မိသားစုထဲတော့ အမှားအမှန် ကွဲကွဲ ပြားပြား သိအောင် ပြောကြ ဆိုကြပါ လို့ ဆိုရမလားပါပဲ။
ရေဒီယို သတင်းတွေက သတင်းစာတွေ ဂျာနယ်တွေထက် ပိုပြီး ခိုင်မာတယ် မှန်ကန်တယ်လေ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆိုပါ။
မအယ်လည်း အစိုးရကို ပစ်တင်ဝေဖန်တာတို့ ဆန့်ကျင်တာတို့ပဲ နိုင်ငံရေးလို့ ထင်နေခဲ့တာပါ။ ခုနက ကိုဇူလှိုင် အစိုးရ ကောင်းကြောင်း ပြောတာလည်း နိုင်ငံရေးပဲ ဆိုတာ မအယ် မသိခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရက သူတို့ကို ဝေဖန်ချင်း မပြုရလို့ ဆိုချင်တာကို လူကြားကောင်းမယ်ထင်လို့ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရလို့ ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဒီရောက်မှ သိတာ။
ဒါတောင် မအယ် သိတတ်စကတည်းက အိမ်မှာ bbc 24 hr ကို တချိန်လုံး ဖွင့်ထားတာ။ ဖေဖေက လမ်းသွားရင်တောင် လက်ထဲမှာ ရေဒီယိုနဲ့။ ပြီးတော့ သူသိတာ ကြားတာ တော်တော်များများ အိမ်သားတွေကို ပြန်ပြန် ပြောပြတတ်သေးတာလေ။
အဖေတို့က တောင်ပေါ်သားတွေမို့လား မသိဘူး။ အစိုးရကို ဘယ်တုန်းကမှ မယုံကြဘူး။ သူတို့မှာ ပေါ်တာလည်း ကြောက်ရ သူပုန်လည်း ကြောက်ရလေ။ မအယ်တို့လည်း ငယ်ငယ်က သိပ် ကြောက်ခဲ့ရတာ။ အဒေါ်တွေဆို ကြံခင်းထဲ သွားသွားပုန်းရတယ်။ အိမ်မှာက ပြောရင်တောင် ဗမာ အစိုးရလို့ ပြောကြတယ်။
ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ပုံစံတွေလည်း မတူလို့ မသိခဲ့ရ တာတွေကို နားလည် ပေးနိုင် ပါတယ်။ မအယ်တို့အားလုံးက အချင်းချင်းတွေပါ မောင်နှမတွေပါပဲ။
ကျနော်လဲ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ကိုဂျူလိုင့်နီးပါးပဲဗျ..
အပြင်ရောက်မှ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်နဲ့ သိရတာ..
ရိုးသားတဲ့ ပိုစ့်လေးမို့ တော်တော်သဘောကျမိတယ်။
နဲနဲတော့ဆင်တယ်.. ဒါပေမဲ့ နဲနဲကွဲတယ်..
ကျွန်မနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ သိပ်ပြီး ဆင်တူတယ်။ ၈၈ မတိုင်ခင်ကဆို အစိုးရမကောင်းကြောင်း ပြောတဲ့သူတွေကို ကျွန်မက ဘာမှနားမလည်ပဲ ကျွန်ပြန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့သူတွေအဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်ထားတယ်။ တကယ်တမ်း ဘာမှနားမလည်သူက ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေတာ ၈ ရက်နေ့မတိုင်ခင် ကျောင်းမှာ လာဝေတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင် တစောင်တည်းနဲ့ စသိလိုက်ရတာ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ဘယ်သူမှ တားလို့မရတော့ဘူး။
မှန်တာပြောရင် ကျွန်တော်လည်း နကန်းတလုံးမှ မသိခဲ့ပါဘူးဗျာ.. ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတ၀ါးဝါးထက် မှောင်သောလမ်းမှာ မှောက်ရက်လဲနေဆဲပါ....
Nothing to say for your post!
ဒါပေမဲ့ ဒါမျိုးတွေ ရှိတယ် ပြောတော့ ထွက်လာတဲ့ အစ တစ်ခုပဲ ဆွဲနင်းပြီး ဆက်ငြင်းမယ်။ လိုရင်းက ပျောက်ရော။
ဒါမျိုးက မရှိတဲ့လူမှာ မရှိပါဘူး။ ရှိတာဟာ တစ်ယောက်ချင်းနဲ့ ဆိုင်တာပါလို့ ဘူးတခါခါ ငြင်းမယ်။ ငြင်းတော့ ဘာဖြစ်လာမှာလဲ။ မရှိတဲ့လူ မရှိပေမဲ့ ရှိတဲ့လူ ရှိနေတာပဲ မဟုတ်လား။
တစ်ယောက်ချင်းဆိုလို့ ပြောရရင် တစ်ယောက်ချင်းမှာတောင်မှပဲ ခုချိန်ထိ မလဲပါဘူး ဆိုတဲ့ အလံကြီးကို ထောင်လိုက် လှဲလိုက်၊ ကိုင်ထားလိုက် လွှတ်ချလိုက် လုပ်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အဓိက ပြောချင်တာက ဒီလိုမျိုး ရှိပါတယ် ဆိုတာပဲ။ ဒါကိုပဲ မရှိပါဘူးချည်း စွတ်တင်တာ ဘာသဘောလဲ နားကိုမလည်ဘူး။ ရှိလား မရှိလား ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရင် ပြန်ကြည့်ဖို့ ကောင်းတယ်။ စတည်းက မရှိတဲ့ လူ မပြောနဲ့။ စတည်းက ရှိလာတဲ့ လူတောင် ခု ဘာလုပ်နေလဲ။ (ဘာလုပ်နေနေ ကိုယ် အပြစ်တင်ဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူး ဘာမှ မပြောရင်။ ဒါပေမဲ့ ပြောလာခဲ့လို့သာ ဆက်ပြောရတာ။ ကိုယ့်ဘာသာပဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်လုပ်နေသေးတာ။ အဲဒါလဲ တယောက်ချင်းကိစ္စပဲ လို့ နားလည်ရမှာ။)
ကြုံတုန်း မငယ်နိုင် ကို appreciate လုပ်ပါရစေ။ ဟို မှာတုန်းက ဘာဆို ဘာမှ ရေးချင်စိတ် မရှိလို့ July ဆီ ရောက်မှ ရေးလိုက်တာပါ။
မငယ် ပြောတာတွေကို လေးစားမိပါတယ်။ ဟိုမှာတည်းက ရေးချင်ခဲ့တာပါ။
အဓိကက ဝေါဟာရပဲ ငြင်းနေလို့ လိုရင်း မရောက် ဖြစ်နေတာ။ ဒါတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တာ ရှိကို ရှိနေသလို၊ ဒါမျိုးတွေ ရှိတာကလည်း အသေအချာပဲ။
တဂ်ပို့စ်ရေးပေးထားတဲ့စာတွေလိုက်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် ပြန်မဖတ်ရဲတော့ဘူး..
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကိုဂျူလိုင်.. နေ့အိပ်မက်ကတော့ နိုင်ငံ့ရဲ့အရေးကို အခုခေါင်းဆောင်တွေလုပ်လို့မပြီးဘဲ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်မှ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံပါတယ်.. ခက်တာက............... (ခက်တာပေါ့နော်..) :)
အကိုရေ ခံစားချက်တွေ တူနေတယ် တချိန်ချိန်ပေါ့ မြင်ကြရမှာပါ တိုးတက်တဲ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကို.. နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တယ်... အမြင်တွေ မတူတိုင်း ရန်သူမှ မဟုတ်တာဗျာ ဒါလေးတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ
ကိုဂျူလိုင်ရေ ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်လေးက အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းဗျ ... အရှိကို အရှိအတိုင်းရေးထားတာလို့လည်း ခံစားရတယ် ..
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက အကြောက်တရားတွေ ဖုံးလွမ်း ရင်း အမှန်တရားတွေနဲ့ ကင်းကွာအောင် နေခဲ့ကြလို့ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ခါးသီးနေကြတာပါ ... အနောက်နိုင်ငံမှာဆို အူဝဲဆိုတာနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို သိပြီးသား .. ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြည်ပကို ရောက်လာတာနဲ့ အိုးချင်းထားတော့ အိုးချင်းထိပေါ့ဗျာ အရသာတွေကို သိရင်းနဲ့ အမှန်တရားတွေကို မြင်လာကြတယ် ဒီမှာပဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ချောက်ထဲ ကျနေမှန်း သိသွားကြတယ် .. ပြီး အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်လာကြတယ် ... ဒါပေမယ့် မျက်လုံးအတင်းစုံမှိတ်ထားတဲ့ လူတွေကတော့ သေရွာထိ မျက်လုံး ပိတ်ပြီး ဆက်လျှောက် နေကြအုံးမှာပါပဲ .....
ထပ်တူနီးပါးပါပဲ။ မကောင်းတာတွေလဲ သိသွားပီဆိုတော့ ကောင်းလာနိုင်မယ့် နည်းလေးကို အဘက်ဘက်က ရောက်အောင် ဆောင်ကျဉ်းကြတာပေါ့ဗျာ။
(ရည်ရွယ်ရာ .. အိပ်မက်လမ်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ဟိုလို ဒီလိုတွေစိုးရိမ်လို့ ပိတ်ပစ်လိုက်တာ ဆိုလား)
ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးတင်တယ် ဂျူလိုင်။ အဲဒီ post အတွက်။ အဲဒီကျေးဇူးကို တင်ဖို့ မလိုဘူးထင်ရင် မယူနဲ့။ လိုတယ်ထင်ရင် ယူလိုက်။ ကိုယ်ကတော့ မင်းယူရင် ဝမ်းသာတယ်။ မယူလဲ ဝမ်းမနည်းဘူး။
(မမ kom စီဘောက်မှာ ပြောခဲ့တာလေး ပျောက်မသွားခင်။ အမိုးကိစ္စကတော့ မဆိုင်လို့ ချန်ခဲ့တယ်။)
သတင်းစာက “အေ” ဆို ကိုယ်က
ဘာလို့ “အေ” ဖြစ်သလဲ
ဒါပေမယ့် သူတို့ လွှင့်တာ
အဲဒီ သတင်းစာက ပြောလို့ ။
အန်တီစုကို သတင်းစာလက်ချက်နဲ့ 
ဗိုလ်ချုပ်သမီးမို့ လို့ချစ်သလို
အန်တီစု ဖြစ်နေလို့ 
မှန်တယ်။ ရေအိုင်အတွင်းမှာနေခဲ့တယ်။ မှိူင်းတိုက်တဲ့ အာဘော်တွေပဲဖတ်ခွင့် ရခဲ့တယ်။(primary II) အရွယ် က တွေ့ ခဲတဲ့ 88 ဆိုတာရယ် 88 အရင် စနစ် ဆိုးဆိုတာရယ် က ထိတွေ့ ခွံင့် ကြားမြင် ခွင့် မှ မရခဲ့ တော လေ့။ gap ဖြစ်သွားတာကတော့ စာတွေလိုက် ဖတ်တဲ့ အရွယ် နဲ့ကော လိပ်တက်တဲ့အရွယ် တွေမှ မြင် ရ ထိတွေ့ ခွင့် ရတဲ့ စာရယ် ဝန်းကျင်ရယ်(လက်ဆင်မ့ ကမ်းနိုင်တဲ့ ) နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်(အမှန်ကိုမြင်နိုင်တဲ အသိမျိုး၊အမြင် မျိုးကျွန်မတို့ မရခဲ့ ပဲ)။အပြင်ရောက်မှ သိ ခဲ့ ရတာပါ.ကိုယ့် လူမျိုး(ခေါင်းမရှိတဲ့ )ခေါင်းဆောင်တွေ က အတ္တကြီး စွာ အာဏာအတွက် ကိုယ်ကျိုး အတွက်အုပ်ချုပ်နေတယ် ဆိုတာ။
သင် တင့် တဲ့အခက်တွေနဲ့ ထောက်ပြလိုက်တဲ့ post ကောင်းလေးတခုပါ။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့ စ်လေးပဲ
အမြင်လေးတွေ မှန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်ကတော့ ပင်လယ်လည်း မဖြတ်ဖူးပါဘူး။ တံတိုင်းလည်း မကျော်ဖူးပါဘူး။ ကျနော် ၀ါးလုံးခေါင်းထဲမှာပဲ နေတယ်။ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သမျှတော့ ကျနော် အပြင်ဘက်ကို မြင်အောင်ကြည့်တယ်ဗျာ။ မြူခိုးမြူနှင်းဆိုတဲ့ အကြောက်တရားကို ထွင်းဖောက်ကြည့်မြင်နိုင်မှ ရွှေရောင်တောက်ပတဲ့ မြို့တော်ကို မြင်ရလိမ့်မယ်။
မင်ခွင့်မရလို့ ကန်းနေတာပါ။ မကြားချင်လို့ နားတွေ ပင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြားခွင့်မရှိလို့ နားတွေ ပိတ်ကုန်တာပါ
တော် လိုက်တာ ဗျာ..Great!
(((ကြုံတုန်း မငယ်နိုင် ကို appreciate လုပ်ပါရစေ။ ဟို မှာတုန်းက ဘာဆို ဘာမှ ရေးချင်စိတ် မရှိလို့ July ဆီ ရောက်မှ ရေးလိုက်တာပါ။
အဓိကက ဝေါဟာရပဲ ငြင်းနေလို့ လိုရင်း မရောက် ဖြစ်နေတာ။ ဒါတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တာ ရှိကို ရှိနေသလို၊ ဒါမျိုးတွေ ရှိတာကလည်း အသေအချာပဲ။)))
အစ်မက ဘာကိုပြောထားလို့ Rita က ဘာကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ လိုက်ဖတ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကလည်း ခပ်များများ ဆိုတော့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်ပို့စ်မှာ ဘာမှတ်ချက်တွေ ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ အကုန်လုံး မမှတ်တော့ဘူး။ အသက်ကြီးပြီလေ မေ့တတ်နေပြီ။ ဒီကြားထဲ ဘာသာစကားကလည်း အားနည်းတော့ စကားကို ဒဲ့ဒိုးပြောရင်တောင်မှ တခါတလေ နားလည်တာမဟုတ်ဘူး။ ရီတာ ဘာအကြောင်းကို ပြောတယ်ဆိုတာ နားမလည်တာ အမှန်ပါ။
ကိုဂျူလိုင်ရေ ဆောရီး- အစ်မတို့က ပို့စ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တာတွေ လာရေးနေလို့ စိတ်မတိုနေနဲ့နော့်။
ပြည်ချစ်တော်လှန်ရေးတွေ ပြည်ပြေးလုပ်ကုန်ကြတော့ အစ်မအနေနဲ့ သူတုိ့ကို အထင်မကြီးမိဘူး။ ခုတော့ ကိုယ်က သူတို့ နေရာရောက်နေပြီ... ဆိုတာလေး အစ်မ။
ဂျူလိုင်ကို ကျေးဇူးတင်တာလဲ ထပ်ရေးပါရစေ။ အပေါ်က comment တွေမှာ ကိုယ်ရေးခဲ့တာ ချဉ်စုတ်စုတ် ဖြစ်နေသလားလို့။ ပထမဆုံး comment ကလည်း ဟိုမှာ မရေးချင်လို့ ဒီမှာ လာရေးတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။ အကြာင်းရင်းကို မသိရင် (သို့) ဦးနှောက်သုံးဖို့ ပျင်းနေရင် ကိုယ်ကပဲ ဂျူလိုင်ကို ဖိုက်ထား သလိုလို ဖြစ်နေတယ်။
တချို့တွေ သူများ မျက်စေ့စုံမှိတ်တာပဲ မြင်တယ်။ သူတို့ ဘာသာ စုံမှိတ်နေတာ မမြင်ဘူး။ ဒီ post ကို ဘယ်လို သဘောနဲ့ တင်သလဲတောင် သိမယ် မထင်ဘူး။ လိုရာ ဆွဲတွေးနေကြတာနဲ့ပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကတော့ July ဒီ post ကို ဘာလို့ ချက်ချင်း တင်သလဲ သိပါတယ်။ ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်။
AFTER READING YOUR POST.. I CRIED..FOR....
I REALLY APPRECIATE..
I MISS OUR UNIVERSITY...RIT/YIT/YTU
ဖတ်ပြီး ထပ်တူ ခံစားရပါတယ်ဗျာ။ ရေးထားတာတွေ မှန်လွန်းနေတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးဗျာ... စိတ်ပျက်မိတာတော့ အမှန်ပဲ၊ ဒါပေမဲ့လည်း ရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်ဗျာ၊ အာဏာတောင် မရသေးဘူး သူတလူ ငါတမင်း ဖြစ်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဒီလိုပုံစံနဲ့တော့ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးနေကြဦးမှာပါပဲဗျာ။
ကျနော်တို့ တခုခု လုပ်ကြရအောင် ဆိုတာထက် ခေါင်းဆောင်းကောင်း တယောက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လိုလူမျိုး လိုအပ်နေတာတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ နေဝင်းပြောသလို ဓါး၊ဓါးခြင်း၊ လှံလှံခြင်း ချဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်ဗျ၊ လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းသာ ဆက်လက် ချီတက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်....... .... ထင်သာထင် တင်မယ်မထင်ဘူး ကျောင်းအမရေ ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ...။
ထွေထွေထူးထူးတော့ မမန့်တော့ပါဘူး။ ၅ နှစ်သားလေး ဆိုပေမယ့် အနီရောင် ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမြင်ကနေ၊ ယုံကြည်ရာကို ရဲရင့်စွာ ရွက်လွှင့်နိုင်ပါစေလို့ပဲ။
လေရူးလည်း အရင်တုန်းက နကန်းတစ်လုံးမှ မသိခဲ့ရပါဘူး ။
၈၉ နောက်ပိုင်းဖွား ဒါမှမဟုတ် မြန်မာမှာ တက္ကသိုလ်မတက်ခဲ့ရတာနဲ့ ဆိုင်မလားတော့ မသိဘူး ။
ဒီရောက်တော့မှ ဝါးလုံးခေါင်းထဲ လသာနေမိမှန်း ရေးရေး ရေးရေး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သဘောပေါက်မိလာတယ် ။ ^_^ !
ဒါလေးဖတ်ပြီး ကျော်ကို. ကို သတိရတယ်
သူနေတဲ့ နေရာကို ပြောပြလို. မရဘူးတဲ့..
သူ.ကလေးတွေ လွတ်လိုက်ပါ့မယ် တဲ့
အခုချိန်ထိ သူ.အတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေးနိင်သေးဘူး